कुलमानलाई नै दोहोर्‍याउँदा विद्युत् क्षेत्रमा उधुमै होला र ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ भाद्र ३०, मंगलवार १७:०५:००
काठमाडाैँ-राज्यशक्ति कमजोर तथा प्रचारमुखी मात्रै भइरहँदा कुनै मन्त्री वा अधिकारीले कर्तव्यका रूपमा गर्नैपर्ने काम गर्दा पनि जनता अति उत्साहित हुने रहेछन् ।
यस्तो अवस्थामा त्यस्ता मन्त्री तथा अधिकारीहरूले त्यही सानो उपलब्धिलाई भजाएर पटक–पटक नियुक्ति खाने र कमिसन खान बाटो बनाउने अवस्था आउँछ ।
देख्दा सादा लाग्ने तर आफ्नो प्रचार गर्न माहिर अधिकारीले जनतामा भ्रम छरेर आफू सधैँ शक्तिमा रहने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । अहिले कुलमान घिसिङको विषयमा पनि त्यस्तै भएको छ ।
कुलमान विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएपछि लामो लोडसेडिङ हट्दै गएको अवश्य हो तर त्यो उनी एक्लैले गरेका होइनन् । अन्य कर्मचारी तथा त्यसबेलाका मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पनि अहम् भूमिका थियो ।
अहिले ती सबै कुरालाई भुलेर र कुलमानका कमजोरीलाई वास्ता नगरी पुन: प्राधिकरणमा दोहोरिनुपर्छ भन्दै सामाजिक सञ्जाल रंगाइएका छन् । सडकमा पनि आवाज उठिरहेको छ ।
उनी पनि प्रधानमन्त्रीको चाकडी गर्न थालेको देखिएको छ । के पछाडिका अधिकारी जसले विद्युत् प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउने तथा लोडसेडिङ हटाउन निरन्तर खटे, उनले प्रमुख पाउन नहुने ? प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने अर्को कुनै व्यक्ति आउन नहुने ? कुलमानलाई मात्रै विकल्परहित देख्नु गलत छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाउन प्रयत्न गरे । सेडिङ हटाउन उनले ठूलो मात्रामा भारतबाट विद्युत् आयात गरे । केही निजी क्षेत्रका आयोजना सम्पन्न भए ।
उनले धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई बिजुली नै दिएनन् । यसैको असरले ठूलो मात्रामा उद्योगहरू बन्द भए । उद्योगहरु विस्थापित हुँदाका असरको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ । उद्योग बन्द गराएर लोडसेडिङ हटाएकामा कुलमानलाई कुलदेवता थाप्नु कति उचित हुन्छ ?
विद्युत् प्राधिकरणजस्तो संस्थाको प्रमुख बनेर संस्था सुधार्नु त उनको जागिर नै हो । त्यसवापत महँगो तलब सुविधा पनि उनले पाएका छन् । यति पनि काम नगर्ने अरु संस्थामा छन् भने तिनलाई गलहत्याउनुपर्छ ।
उनको कार्यकालमा राम्रा काम मात्रै नभएर कमजोरी पनि प्रशस्त भएका छन् । काठमाडौंमा लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेसँगै कुलमान एलईडी बल्ब खरिद प्रकरणमा मुछिन पुगे ।
भारतको सरकारी कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गरेर बाँड्ने, हिउँदमा बिजुली खपत घटाएर आपूर्ति सहज गर्ने उनको योजना विवादमा पर्यो ।
यसमा ठूलो कमिसनको खेल हुन लागेको तथ्य बाहिरिएपछि योजना नै तुहिन पुग्यो । अर्को, ठूलो मात्रामा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि चाहिने सामग्री भारतबाट गरिद गर्दा ठूलो कमिसनको खेल भएको नेकपाका सांसदले नै उठाएका छन् ।
कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादमा पनि फसेका छन् । घिसिङ प्राधिकरण आउनुभन्दा अघि जोडिएको प्रिमियम दरको डेडिकेटेड लाइनको महसुल उद्योगीहरूले हटाउन माग गरे । सुनुवाइ नभएपछि अदालतसम्म पुगे ।
लोडसेडिङ हटेका बेलासमेत भैरहवालगायत औद्योगिक करिडोरमा अझ ट्रंकलाइन जोडियो । उद्योगीले त्यसको पत्तोसम्म पाएनन् । प्राधिकरणले करोडौं छुट बिल पठाएपछि मात्रै उद्योगीले थाहा पाए । उद्योग क्षेत्रले प्राधिकरणले अन्याय गरेको भन्दै तीव्र विरोध गरे ।
सरकारले विवाद समाधानका लगि समिति बनाए पनि अझै त्यसको समाधान भएको छैन । अख्तियारले पनि डेडिकेटेड शुल्क नलिन र खपतको आधारमा शुल्क उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
कुलमानको कार्यकालमा सकिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण आयोजना अधुरै रहेका छन् । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न हुन सकेन । यसबाहेक रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी र सान्जेन जलविद्युत् आयोजना अधुरै रहे ।
यी कम्पनी पूरा नहुनुमा ठेकेदारको लापरबाही र आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरी प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । यति मात्र होइन, अन्य साना–ठूला आयोजना पनि पूरा भएनन् । कुलमान तनहुँ जलाशययुक्त आयोजनाको ठेक्कामा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न असफल देखिए ।
कुलमानको कार्यकालमा विभिन्न प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सुस्त रह्यो । आन्तरिक प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई समेत कुलमानले गति दिन सकेनन् । लोडसेडिङ हटे पनि वितरण लाइनको गुणस्तर बढाउन असफल देखिएका छन् ।
जाडो समयमा विद्युत् प्रसारण लाइनले एसी र हिटरको लोडसमेत धान्न सक्दैन । वितरण केन्द्रहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकेनन् ।
कुलमानले प्राधिकरणमा भइरहेका विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक चलखेल रोक्न पनि असफल देखिएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।
कुलमानले प्राधिकरणका गाडीहरू दुरुपयोग र कर्मचारी युनियनमा आबद्धको दादागिरी रोक्न सकेनन् । त्यस्तै सहायक कम्पनीमा मौलाएको बेथिति रोक्न पनि कुलमान सक्षम भएनन् । यी सबै कुराले कुलमानको व्यवस्थापकीय उत्कृष्टता देखिन्न ।
यथार्थ भुलेर चाकडी
कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री रहेका बेला नियुक्त गरिएको हो ।
नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हटाउन ऊर्जामन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्माको ठूलो हात छ । उनले कुलमानलाई निडर रूपमा अघि बढ्ने वातावरण दिए ।
घिसिङको कमीकमजोरीलाई पनि शक्तिमा बदल्ने अवसर जुटाइदिए । कार्यकारी प्रमुखले जस्तो निर्णय गरे पनि शर्माले मन्त्रीका रूपमा समर्थन गरिरहे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले पनि कुनै हस्तक्षेप गरेनन् । यस्तो यथार्थ भए पनि कुलमानले उनीहरूको योगदानलाई सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा उल्लेख गर्न कन्जुस्याइँ गरेका छन् ।
भर्खरै एउटा निजी टेलिभिजन कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल र जनार्दन शर्माको नामसम्म लिएनन् । बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटक–पटक प्रशंसा गरे ।
यसले के देखाउँछ भने कुलमानले प्राधिकरणमा पुनः नियक्ति पाउन प्रधानमन्त्रीको चाकडी गर्न थालेका छन् ।
कुलमानले अहिलेसम्म आफूभन्दा पहिलेका प्राधिकरण प्रमुखका बदमासी के थिए र लोडसेडिङ घट्न सकेको थिएन भनेर अहिलेसम्म कतै बताएका छैनन् ।
यदि उनी सच्चा राष्ट्रवादी हुन् र संस्थाको हित चाहन्छन् भने एउटा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा पनि विगतका बदमासी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि उनले यो कुरा सार्वजनिक गर्दैनन् भने यसबाट दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ-
एक, लोडसेडिङ अन्त्य कुलमानको निजी चमत्कार नभई विगतदेखिकै क्रमिक प्रयासको प्रतिफल हो । दुई, विगतका प्रमुखको बदमासीबारे कुलमानले मुख नखोल्ने, बरु ढाकोछप गर्ने गोप्य समझदारी छ ।
बुझिएअनुसार, कुलमान अब प्राधिकरण फर्किने पक्षमा छैनन् । बाहिर आफूलाई देवत्वकरण गराएर अर्को योभन्दा ठूलो पद उनले ताकेका छन् । त्यसैका निम्ति ओलीको प्रसंशामा सम्पूर्ण बल लगाइरहेका छन् ।
प्राधिकरणमा गरेका ठूला खरिद र कमिसन प्रकरणमा अख्तियारले गर्न सक्ने सम्भावित हस्तक्षेप छल्न पनि अब कुलमान त्यहाँ फर्किने पक्षमा छैनन् ।
यसैले कृत्रिम व्यक्तित्व निर्माण गरी त्यसको पूजामा रमाउनेभन्दा पनि यथार्थमा आधारित मूल्यांकन गर्दा नै संस्था र पद्धतिको संवर्द्धन हुन्छ ।
व्यक्तिको देवत्वकरणले संस्था र त्यसभित्रको प्रणाली झन् कमजोर हुन्छ । भोलि आउने असल र इमानदार नेतृत्वलाई काम गर्न गाह्रो पर्छ ।